बाउन्स रेट के हो? तपाईं कसरी आफ्नो बाउन्स दर सुधार गर्न सक्नुहुन्छ? | Martech Zone
बाउन्स रेट ती KPI हरू मध्ये एक हो कि डिजिटल मार्केटरहरूले विश्लेषण गर्न र सुधार गर्न को लागी धेरै समय खर्च गर्दछ। जहाँसम्म, यदि तपाई बाउन्स के हो भनेर राम्ररी बुझ्नुहुन्न भने, तपाईले यसलाई कसरी सुधार गर्ने प्रयास गर्दै गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। म बाउन्स रेटको परिभाषा, केही सूक्ष्मता, र केहि तरिकाहरू मार्फत जान्छु जुन तपाईं आफ्नो बाउन्स दर सुधार्न सक्नुहुन्छ।
बाउन्स दर परिभाषा
A उछाल तपाइँको साइट मा एकल पृष्ठ सत्र हो। एनालिटिक्समा, बाउन्स विशेष रूपमा सत्रको रूपमा गणना गरिन्छ जसले एनालिटिक्स सर्भरमा केवल एकल अनुरोधलाई ट्रिगर गर्दछ, जस्तै जब एक प्रयोगकर्ताले तपाइँको साइटमा एकल पृष्ठ खोल्छ र त्यसपछि त्यस सत्रमा एनालिटिक्स सर्भरमा कुनै अन्य अनुरोधहरू ट्रिगर नगरी बाहिर निस्कन्छ।
बाउन्स दर सहि मापन गर्न, हामीले बाउन्सको जम्मा संख्या लिनुपर्नेछ र ब्लगबाट कर्पोरेट वेबसाइटमा सन्दर्भ भ्रमणहरूलाई घटाउनुपर्नेछ। त्यसो भए - केहि बाउन्स परिदृश्यहरू पार गरौं:
एक आगन्तुक ब्लग पोष्टमा अवतरण गर्दछ, सामग्रीमा रुचि राख्दैन, र तपाईंको साइट छोड्दछ। त्यो बाउन्स हो।
एक भिजिटिंग एक अवतरण पृष्ठ मा अवतरण तब तपाइँको आवेदन को लागी दर्ता गर्न कल-टु-एक्शन क्लिक गर्दछ। यसले तिनीहरूलाई फरक सबडोमेन वा डोमेनमा बाह्य साइटमा लैजान्छ जुन फरक गुगल एनालाइटिक्स खाताहरू चलाउँदछ। त्यो बाउन्स हो।
एक दर्शकले खोजी परिणामबाट एउटा लेखमा अवतरण गर्दछ जहाँ तपाइँको पृष्ठ उच्च स्तरमा छ ... एक शब्दको लागि जुन तपाइँको उत्पादनहरू वा सेवाहरूमा लागू हुँदैन। खोज परिणामहरूमा फर्कन उनीहरूको ब्राउजरमा फिर्ता बटन थिच्नुहोस्। त्यो बाउन्स हो।
घटनाक्रम बाउन्स दर शून्य बनाउन सक्छ
बाउन्स दर सामान्यतया पहिलो पटकको आगन्तुकको मापन सूचकको रूपमा देखीन्छ मंगनी एक वेबसाइट मा ... तर तपाईं सावधान हुनु पर्छ। यहाँ एक परिदृश्य छ जुन तपाइँलाई चकित पार्न सक्छ:
तपाई एनालिटिक्स कन्फिगर गर्नुहोस् घटना पृष्ठमा ... जस्तै प्ले बटन थिच्दै, स्क्रोल घटना, वा पपअप डिभ हुने।
एक घटना, जबसम्म एकको रूपमा निर्दिष्ट गरिएको छैन गैर अन्तर्क्रिया घटना, प्राविधिक हो मंगनी। बजारहरूले प्राय पृष्ठहरूमा घटनाहरू थप्दछन् बढि ध्यानपूर्वक निरीक्षण गर्न कसरी आगन्तुकहरूले पृष्ठमा तत्त्वहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिरहेका छन् वा जब वस्तु पृष्ठमा देखिन्छन्। घटनाक्रमहरू सment्लग्नता हुन्, त्यसैले तत्काल तिनीहरू बाउन्स दरहरू शून्यमा झर्छन्।
बाउन्स दर बनाम निकास दर
बाउन्स दरको साथ बाहिर निस्कन दरलाई भ्रमित नगर्नुहोस्। एक्जिट दर तपाईंको साइटमा एकल पृष्ठमा विशिष्ट छ र आगन्तुकले त्यो पृष्ठ छोडेको अर्को पृष्ठमा (अनसाइट वा अफ)। बाउन्स रेट पहिलो पृष्ठको लागि निर्दिष्ट छ जुन एक आगन्तुकले उनीहरूको साइटमा आरम्भ गरेको सत्र भित्र नै लैजान्छन् ... र भ्रमण गरे पछि तिनीहरूले तपाईंको साइट छोडे।
यहाँ केहि बिच विशिष्ट छ निकास दर र बाउन्स दर विशेष पृष्ठको लागि:
पृष्ठमा सबै पृष्ठदृश्यहरूका लागि, निकास दर को प्रतिशत छ कि अन्तिम सत्र मा।
सबै सत्रहरूको लागि जुन पृष्ठसँग शुरू हुन्छ, बाउन्स दर को प्रतिशत छ कि थियो मात्र एउटा सत्र।
बाउन्स दर एक पृष्ठ को लागी मात्र सत्र मा आधारित छ कि पृष्ठ को साथ शुरू।
बाउन्स रेटमा सुधार गर्दै सगाईमा चोट पुग्न सक्छ
एक मार्केटरले आफ्नो बाउन्स रेट सुधार गर्न सक्दछ र तिनीहरूको साइटमा स destroy्लग्नता नष्ट गर्दछ। कल्पना गर्नुहोस् कि कोहीले तपाईंको साइटमा पृष्ठ प्रविष्ट गरिरहेको छ, तपाईंको सबै सामग्री पढिरहेको छ, र तपाईंको बिक्री टीमसँग प्रदर्शन प्रदर्शन गर्दैछ। उनीहरूले यस पृष्ठमा अरू केहि पनि क्लिक गरेन ... भर्खर आईपुगेका, सुविधाहरू वा लाभहरू मार्फत पढ्नुहोस्, र विक्रेतालाई फिर्ता ईमेल गर्‍यो।
त्यो प्राविधिक रूपमा छ उछाल... तर के यो वास्तवमै समस्या थियो? होईन, होईन। त्यो शानदार संलग्नता हो! यो मात्र हो कि घटनाहरू क्याप्चर गर्न विश्लेषणको क्षमता भन्दा बाहिर यसको केही घटना घटेको छ।
केही प्रकाशकहरू कृत्रिम ढounce्गले बाउन्स रेटहरू कम विज्ञापनदाताहरू र प्रायोजकहरूको लागि राम्रो देखिन्छ। तिनीहरू बहु पृष्ठहरूमा सामग्री तोडेर यो गर्छन्। यदि कुनै व्यक्तिले पूरै लेख पढ्नको लागि pages पृष्ठहरू मार्फत क्लिक गर्नुपर्‍यो भने, तपाईले आफ्नो बाउन्स रेट घटाउन र तपाईंको पृष्ठ दृश्य वृद्धि गर्न सफल हुनुभयो। फेरी, यो तपाइँको विज्ञापन दरहरू बढाउने एक रणनीति हो तपाइँको आगन्तुक वा विज्ञापनकर्तामा कुनै मूल्य वा प्रयास थपे बिना।
यो प्रविधिको साँच्चै शम छ र म यो सिफारिस गर्दैन ... विज्ञापनदाताहरू वा तपाईंको आफ्नै आगन्तुकहरूको लागि। तपाईको आगन्तुकको अनुभव कहिले बाउन्स रेट द्वारा निर्धारण गर्नु हुँदैन।
तपाईंको बाउन्स दर सुधार गर्दै
यदि तपाईं आफ्नो बाउन्स रेटलाई प्रभावकारी रूपमा कम गर्न चाहानुहुन्छ, त्यहाँ केहि तरिकाहरू छन् जुन म सिफारिस गर्दछु।
राम्रो संगठित र अनुकूलित सामग्री लेख्नुहोस् जुन तपाइँको दर्शकले खोजी गर्दैछ। तपाइँको साइटमा ट्राफिक को बारे को लागी केरवर्ड गरी केहि अनुसन्धान गरेर किवर्डलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्, तब तपाइँको पृष्ठ शीर्षकहरू, पोष्ट शीर्षक, पोष्ट-स्लग र सामग्रीमा प्रयोग गर्नुहोस्। यो सुनिश्चित गर्दछ कि खोज इञ्जिनहरूले तपाईंलाई उचित रूपमा अनुक्रमणिका गर्छन् र तपाईंको साइटमा आगन्तुकहरू अवलोकन गर्ने सम्भावना कम हुन्छ जो रूचि नभएको र त्यो बाउन्स छ।
तपाईंको सामग्री भित्रका आन्तरिक लिंकहरूको उपयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईंको दर्शक एक विशिष्ट खोजीको लागि तपाईंको साइटमा पुग्यो भने - तर सामग्री मेल खाँदैन - सम्बन्धित शीर्षकहरूमा केहि लिंकहरू भए तपाईंको पाठकहरूलाई समेट्न मद्दत गर्दछ। तपाईसँग बुकमार्कहरूको साथ अनुक्रमणिकाको तालिका हुन सक्छ जुन व्यक्तिलाई विशेष उपटोपिक्स वा उपशीर्षकहरूमा पुग्न मद्दत गर्दछ (बुकमार्कमा क्लिक गर्नु भनेको संलग्नता हो)।
ट्यागिंग वा कीवर्डमा आधारित स्वत: उत्पन्न पोस्ट। मेरो ब्लग को लागी, म उपयोग Jetpack सम्बन्धित पोस्ट सुविधा र यसले तपाईंको वर्तमान पोष्टको लागि प्रयोग गर्नुभएको ट्यागसँग सम्बन्धित थप पोष्टहरूको सूची प्रदान गर्ने ठूलो काम गर्दछ।
गुगल ट्याग प्रबन्धक प्रयोग गरेर, तपाईं सजीलै गर्न सक्नुहुन्छ ट्रिगर स्क्रोलि events घटनाहरू एक पृष्ठ मा। यसको सामना गरौं ... पृष्ठबाट प्रयोगकर्ता स्क्रोल हुँदैछ मंगनी। अवश्य पनि, तपाइँ गतिविधि आफ्नो समग्र लक्ष्यों को लागी लाभदायक छ भनेर पक्का गर्नको लागि तपाइँको समय मा साइट र समग्र रूपान्तरण मेट्रिक्स को निगरानी गर्न चाहानुहुन्छ।
बाउन्सहरू हटाउँदै जुन वास्तविक संलग्नता हो
मेरो परिदृश्यलाई याद गर्नुहोस् जहाँ मैले उल्लेख गरेको छ कि कसैले तपाईंको साइटमा प्रवेश गर्नुभयो, पृष्ठ पढ्नुहोस्, त्यसपछि बाह्य साइटमा दर्ता गर्न क्लिक गर्नुभयो? तपाईले यो गर्नको लागि केही चीजहरू गर्न सक्नुहुन्छ कि यो तपाईंको साइटमा बाउन्सको रूपमा दर्ता गरिएको छैन:
लिंकको क्लिकको साथ घटना संबद्ध गर्नुहोस्। एक घटना थप गरेर, तपाईंले भर्खर बाउन्स हटाउनु भएको छ जब एक आगन्तुकले क्लिक गर्दा तपाईं तिनीहरूलाई मनपराउनुहुन्छ। यो संग गर्न सकिन्छ कल-टु-कल वा क्लिक गर्नका लागि ईमेल लिंकहरू।
मध्यवर्ती रीडायरेक्ट पृष्ठ थप्नुहोस्। यदि म क्लिक गर्छु दर्ता र त्यसपछि अर्को आन्तरिक पृष्ठमा अवतरण गर्नुहोस् जुन क्लिक ट्र्याक गर्दछ र व्यक्तिलाई बाह्य पृष्ठमा पुनःनिर्देशित गर्दछ, त्यो अर्को पृष्ठ दृश्यको रूपमा गणना हुनेछ र बाउन्स होइन।
तपाइँको बाउन्स दर प्रवृत्तिहरूको निरीक्षण गर्नुहोस्
म तपाईलाई यहाँ सिफारिस गर्दछु कि समयको साथ बाउन्स रेटमा ध्यान केन्द्रित गर्नु भन्दा यहाँ यसको उदाहरणको बारेमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। माथिका प्रविधिहरू प्रयोग गरेर, तपाईं विश्लेषणहरू बीच परिवर्तन कागजात गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि हेर्नुहोस् तपाईंको बाउन्स रेट कसरी सुधार हुँदैछ वा खराब हुँदैछ भनेर। यदि तपाईं KPI को रूपमा बाउन्स रेटमा सरोकारवालाहरूसँग सञ्चार गर्दै हुनुहुन्छ भने, म प्रक्रियामा केहि चीजहरू गर्न सिफारिस गर्दछु।
शेयरधारकलाई बाउन्स दर के हो भन्ने कुराकानी गर्नुहोस्।
संचार गर्नुहोस् किन बाउन्स दरहरू ऐतिहासिक रूपमा राम्रो सूचक नहुन सक्छ।
बाउन्स रेटमा प्रत्येक नाटकीय परिवर्तन संचार गर्नुहोस् किनकि तपाईले आफ्नो साइटमा घटनाहरू थप राम्रोसँग मोनिटर गर्ने संलग्नता राख्नुहुन्छ।
समयको साथ तपाईंको बाउन्स रेट प्रवृत्ति हेर्नुहोस् र तपाईंको साइट संरचना, सामग्री, नेभिगेसन, कल-टु-एक्शन, र घटनाहरूको अनुकूलन जारी राख्नुहोस्।
तलको रेखा यो हो कि म बरू आगंतुकहरूले पृष्ठ प्रविष्ट गर्न चाहन्छन, उनीहरूलाई चाहिएको सबै चीज फेला पार्दछन्, र उनीहरूलाई मसँग व्यस्त रहन वा छोड्नुहोस्। एक अप्रासंगिक आगन्तुक खराब बाउन्स छैन। र एक व्यस्त आगन्तुक जसले कहिले पनि पृष्ठ छोड्नु बिना नै रूपान्तरण गर्छन् तिनीहरू मा खराब बाउन्स छैन, या त। बाउन्स दर विश्लेषणलाई केहि अतिरिक्त काम चाहिन्छ!
टैग: विश्लेषणउछालउछाल दरGoogle विश्लेषण
मैले पृष्ठदृश्यहरू बढाउनको लागि ती धोखाधडी विधिहरू जस्तै केहि गर्ने बारे सोचेको छैन। मसँग मेरो साइटमा पहिले नै कम बाउन्स दर छ त्यसैले यो ठूलो चिन्ता होइन, मलाई लाग्छ कि मैले यसको बारेमा सोच्न आवश्यक छैन!
सिफारिस गरिएका विधिहरूको लागि, म केहि समयको लागि सम्बन्धित पोष्ट प्लगइन प्रयोग गर्दैछु र यसले निश्चित रूपमा पृष्ठदृश्यहरू बढाउँछ। मैले अझै सम्म मेरो सामग्री लिङ्क अप्टिमाइज गरेको छैन।
मेरो भर्खरको पोस्ट स्लिम गर्ल्स बक्स अफ सीक्रेट्स समीक्षा